Stipple: Sawirro Caqli iyo Isdhaxgal leh | Martech Zone
Kawaran haddii aad sawirro u diri kartid boggaaga ama balooggaaga, ka dhig kuwo is-dhexgal ah, oo leh adeegsiga iyo calaamadeynta safarka iyaga oo la socda maadaama ay ka soo guuriyeen boggaaga oo ay u badbaadiyeen mid kale? Waxaad hadda ku samayn kartaa sidan Jeexjeex. Stipple wuxuu kaloo awood u siiyaa macluumaadka isticmaalka iyaga oo adeegsanaya Analytics xirmo. Mouseover sawirka hoose si aad u aragto Stipple oo ficil ah!
Waad arki kartaa astaamaha is-dhexgalka ah ee aan ku darsaday sawirkan xafiiskeenna - khariidaynta, Facebook, Twitter, iyo xitaa sumadda wax iibsiga ee aad ka iibsan karto buuggayga. Mid ka mid ah waxyaabaha aan aaminsanahay in Stipple looga faa'iideysan karo si wax ku ool ah marka laga eego dhinaca Suuqgeynta waa daabacaadda sawir-gacmeedka! Lahaanshaha awoodda lagu dari karo dhawaaqyada iyo raacitaanka adeegsiga bogga 'infographic' ayaa si aan caadi aheyn u caawin doona noolaha kasta.
Mashiinka sumadda iyo maareynta waa lacag la'aan oo loo dhisay sidii codsi wadaag wadaag bulsheed.
Waa kuwan muuqaalka muuqaalka guud ee tikniyoolajiyadda:
Jeexjeex wuxuu leeyahay waxyaabo loogu talagalay WordPress iyo nidaamyada kale ee maareynta maareynta si toos ah loo waafajiyo loona raro sawirrada bartaada.
Stipple waxaa loo isticmaali doonaa on images ka Abaalmarinta Filimka Xulashada Dhaleeceeyayaasha. Iyadoo lala kaashanayo Dadka, Taageerayaashu way baari karaan oo ay ka adeegan karaan 'Filimmada iyo moodada' roogga cas ee loo marayo Baahinta Dadweynaha.com ee Abaalmarinta Filimka Xulista dhaliisha. Tikniyoolajiyadda is-dhexgalka ee Stipple ayaa u oggolaan doonta taageerayaasha inay wax badan ka bartaan xiddigaha, filimadooda, iyo qaababka ay u shaqeeyaan. Abaalmarinta Filimka Xulista dhaliisha waxaa la qaban doonaa Khamiista, Janaayo 10, 8 fiidnimo EST. Bandhigga hore ee roogga cas wuxuu bilaabmayaa 6-da galabnimo EST.
Tags: falanqaynta sawirkaka-qaadista sawirkasawir ku dhejintaadeegsiga sawirkaadag